Soo dejisan Photo Collage Maker 7 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaPhoto Collage Maker
Bogga rasmiga ah: Photo Collage Maker
Sawir qaadaha sawir-qaadaha – software si loo sameeyo sawirro asal ah oo ka socda sawirro. Barnaamijka ayaa bixinaya si uu u doorto naqshadeynta iyo muraayadaha ka soo baxa liiska, ku dar sawirradaada adigoo isticmaalaya shaandhooyin kala duwan si loo abuuro mashruuc sawiro ah oo cajiib ah. Sawir gacmeed sawir leh wuxuu leeyahay qaybo badan oo ka mid ah shaababyada kuwaas oo loo qaybiyey qaybo cayiman oo si sahlan loo habeeyay marka la fiiriyo isticmaalaha. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawirro sawirto, ku dar dhalaalid iyo kala duwanaansho, midabada saxda ah ee saxda ah ama isticmaal qalabyada kale ee tooska ah ee dusha toosan adigoo isticmaalaya sawirka asalka ah. Photo Collage Maker wuxuu taageersan yahay dhoofinta sawirada sawirada ee muuqaalka sawirada muuqaalka ah waxayna awood u leedahay in lagu keydiyo JPEG-da la yiraahdo iyadoo la tixgelinayo xajmiga feylalka iyo tayada muuqaalka. Sidoo kale, Photo Collage Maker waxaa ku jira tifaftiraha bogga ee dhismaha kaas oo bixiya xulashada nooca la rabo si uu u daabaco albaabyada sawirada, boosteejada, boostada, foorjada ama waxyaabo kale oo tayo leh.
Isticmaalidda jajabka, maskadaha, fananka fanka iyo qoraalka
Qaab ururin ballaadhan oo ku saabsan qaababka
Ku dhoofi qaababka muuqaalka sawirrada
Daabacaadda tayo sare leh
Soo dejisan Photo Collage Maker
Faallo ku saabsan Photo Collage Maker
Photo Collage Maker Xirfadaha la xiriira